Soo-saareyaasha Korantada Korantada, Alaab-qeybiyeyaasha - Warshada Xiryaha Korontada ee Shiinaha
Qulqulka kulul ee galvanized barroosinka
Qalabka birta xoogga leh awoodda...
Caawinta degdega ah ee furaha
Magaca Alaabta Torsion Shear Bolt Sharaxaadda Dhallaanka xoogga badan waxay u kala qaybsan yihiin nooca torsion-xiiritaanka boolal-xoog-sare iyo boolal waaweyn oo laba geesood ah iyadoo loo eegayo habka dhismaha. Nooca xiiridda torsion bolt-xoog sare waxa uu ka kooban yahay boolal, lowska, iyo dhaqaha. Waa nooc la hagaajiyay oo ah boolal waaweyn oo lix geesood ah oo xoog badan si ay ugu habboonaato naqshadeynta dhismaha. Boolal-xoog-sare ayaa inta badan loo adeegsadaa injineernimada qaab-dhismeedka birta. Muuqaal aad u muhiim ah...
Dabool xoog sare leh
Magaca: Boolal xoog-sare ah Sharaxaadda: Dhalooyinka xoogga badan waxay u qaybsan yihiin nooca torsion-xiiritaanka boolal-xoog-sare iyo boolal waaweyn oo lix geesood ah iyadoo loo eegayo habka dhismaha. Nooca xiiridda torsion bolt-xoog sare waxa uu ka kooban yahay boolal, lowska, iyo dhaqaha. Waa nooc la hagaajiyay oo ah boolal waaweyn oo lix geesood ah oo xoog badan si ay ugu habboonaato naqshadeynta dhismaha. Boolal-xoog-sare ayaa inta badan loo adeegsadaa injineernimada qaab-dhismeedka birta. Muuqaal aad u muhiim ah oo ah awoodda sare ee b...
Gaar ahaan qalabyada korantada ee daloolsan
Faahfaahin Degdeg ah >>> Dhamaystirka zinc Material Science ahama Moodel GB9074.17 Halbeegga heerka qaran ee Magaca Alaabta Daloola Hexagon bolt Walxaha Sayniska birta aan lahayn Fasalka 201/304 Cabbirrada 6*20 Aqbal waxka beddelka Hal xidhmo Cabbir 27.5 * 35 * 20 cm Baakad Baakadaha caadiga ah ee dhoofinta ama iyadoo loo eegayo shuruudaha macmiilka Sharaxaada badeecada >>> xidhidhayaashu waa nooc ka mid ah qaybaha makaanikada oo...
U-bolts-ka galvanized-ka kulul waa la habeyn karaa
Sharaxaada Alaabta >>> Magaca Alaabta: U Bolt Size: M2-M40 Material Carbon steel. Fasalka:4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 Dusha Dhamaystirka Banaanka, HDG, Zn-plated, Black(xoog sare) , Sida shuruudahaaga. Heerka DIN GB ISO JIS BA ANSI Shahaadada ISO9001, SG Aan caadiga ahayn OEM waa la heli karaa haddii aad bixiso sawir ama muunad. Xidhmada Heerka dhoofinta baakooyinka ama sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha
Daboolka kulul ee galvanized hexagons waa la habeyn karaa
Sharaxaada badeecada >>> Waxaa jira magacyo badan oo kala duwan oo loogu talagalay boolka dibedda ee laba geesoodka ah, tusaale ahaan, waxaa loogu yeeri karaa bolt-ka laba geesoodka ah, tusaale ahaan, waxaa loogu yeeri karaa daboolka sare ee laba geesoodka ah. Waxa kale oo loogu yeedhi karaa bool saddex geesood ah oo dibadda ah. Dhammaan tani waxay ka dhigan tahay isku shay. Waa uun in caadooyinka shakhsi ahaaneed ay ka duwan yihiin. Daawaynta dusha sare ee galvanizing kulul ka dib, saamaynta ka-hortagga daxalka ayaa la gaaraa. 1. boolal caadi ah waxa loo qaybiyaa a, b iyo c. Labada hore waa boolal la safeeyey, kuwaas oo ah sel ...
Qulqulka kulul ee galvanized
Sharaxaada Alaabta >>> Stud, oo sidoo kale loo yaqaan screw stud ama urka. Waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro shaqada isku xirka go'an ee mishiinka. Labada daraf ee urka urka ayaa dunta ku yaal, furka dhexda ku yaal waa dhumuc iyo dhuuban. Waxaa guud ahaan loo adeegsadaa makiinadaha macdanta, buundooyinka, baabuurta, mootooyinka, dhismayaasha birta kuleyliyaha ah, munaaradaha laalaada, dhismayaasha birta ee dhaadheer iyo dhismayaal waaweyn. Usha laba-madaxa ah, oo sidoo kale loo yaqaanno madaxa labajibbaaran ama caarada madax labanlaab ah. Waxa loo adeegsadaa in lagu xidho hagaajinta...
Xoog Sare Hexagon Madaxa Bolt Xadhigaha Korontada
Magaca: Galvanized Hexagon Bolts Certificate: ISO9001 / CE / ROHS Nooca: Daaweynta Dusha LJ: Dip Kulul Galvanized Iftiinka Sare: Hexagon Head Bolt Koronto Xadhigaha, ISO9001 Hex Bolt Koronto Xidhmada Xadhkaha Gudbinta Taawarradayada Taawarada waxa si gaar ah loogu naqdiyay Taawarrada gacanta, Taawarrada gudbinta Korontada, iyo shirarka Taawarada raadiyaha, haddii lagu dabaqo wax ka beddelka, kor u qaadista...
Qulqulka Kulul ee Galvanized M104 Hex Bolts Xadhkaha Korontada
Faahfaahinta Faahfaahinta Magaca Alaabta Sharaxaada: Galvanized Hexagon Bolts Shahaadada: ISO9001/CE/ROHS Nooca: LJ Daaweynta Dusha sare: Dip Galvanized High Light: Dip Kulul Galvanized Korontada Xadhigaha, M104 Hex Bolts Koronto Xadhigaha, M104 Galvanized Hexagon Bolts Hexagon Bolts Xoog Sare Bolts For Uhvehv Transmission Line Tower Towers Our Towers waxaa si gaar ah loogu talagalay munaaradaha gacanta, gudbinta korontada
M105 Galvanized Surface Steel Tower Bolts Qalabka Korontada
Magaca: Birta Tower Bolts Dhamaystirka: Shahaadada dusha sare ee galvanized: ISO9001/CE/ROHS Brand: LJ High Light: Tower Bolts Xadhigaha Korontada, M105 Bolts Koronto xidhe, M105 Birta Tower Bolts Birta Birta Bolts Dhammaan alaabtu waxay ku jiraan daawaynta dusha sare ee galvanized kulul inta badan iyadoo la isticmaalayo ee mashaariicda munaaradda birta ee khadka gudbinta. cabbirku wuxuu ka iman karaa M12-M105, boolalku waxay noqon karaan qaabab kala duwan oo ay ku jiraan boolal. U bolts, boolal barroosin ah.V-bolts iwm. Astaamaha: Naqshad adag iska caabin daxalka
Birta Towers Hot Dip Galvanized Hex Bolts Qalabka Korontada
Faahfaahinta Faahfaahinta Sharaxaada Alaabta Shahaadada: ISO9001 / CE / ROHS Magaca: Dip Galvanized Hexagon Bolts Feature: Codsiga Xoogga Sare: Gudbinta Lne Birta Daaradaha Iftiinka Sare: Hex Bolts Koronto Xidhiidhiyaha, Galvanized Bolts Koronto Xidhiidhiyaha Galvanized Hexagon Bolts For Uhvehv Gudbinta Lne Steel Towers dhammaan alaabtu waxay ku jiraan daawaynta dusha sare ee galvanized kulul inta badan iyadoo la adeegsanayo khadka gudbinta munaaradda birta p..
Xidhiidhiyaha Korontada ee Hexagon Bolts ee Dhismooyinka Khadka Gudbinta
Macluumaadka Faahfaahinta Sharaxaada Alaabta: Galvanized Hexagon Bolts Certificate: ISO9001/CE/ROHS Nooca: LJ Daaweynta Dusha sare: Dip Galvanized High Light: Hexagon Bolts Koronto Xidhiidhiyaha, Xadhkaha Gudbinta Qalabka Korontada Bolts For Uhvehv Transmission Line Towers Steel All alaabtu waxay ku jiraan daawaynta dusha sare ee galvanized kulul inta badan usi...
Nooca 7 boolal galvanized quful kulul waa la beddeli karaa
Sharraxaadda Alaabada >>> Qalabka 7-qaabeeya waa nooc ka mid ah boodhka loo isticmaalo goobta dhismaha, oo leh qaab 7-qaabeeya. Waxa kale oo loo yaqaan bolt barroosin saxan la xoojiyey, biraha barroosinka welded, biraha barroosinka cidiyihii, bolt saxan seedaha, boolal barroosin, fur barroosin, silig barroosin, iwm. Waxa si gaar ah lagu aasay in aasaaska shubka ah oo loo isticmaalo sida saldhigga u hagaajinta kala duwan. mashiinada iyo qalabka. Boltanka barroosinka ah ee 7-qaabeeya waa mid ka mid ah biraha barroosinka ee inta badan la isticmaalo. Q235 birta waa gen...